Wakiilada Beesha Caalamka oo kulan xasaasi ah la leh Ra'iisal wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Wakiilada Beesha Caalamka oo kulan xasaasi ah la leh Ra’iisal wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta
Waxaa xarunta Afisyoone ka socda kulan gaara oo wakiilada Beesha caalamka la leeyihiin Ra’iisal wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble.
Kulankan oo ahaa kii ugu horeeyay ee dhex mara labada dhinac, kadib markii laga laabtay muddo kororsigii, maamulka doorashadana lagu wareejiyey Maxamed Xuseen Rooble ayaa la sheegay inay dalbadeen Wakiilada Beesha Caalamka oo warbixin ka sugaya RW Rooble.
Waxa kulanka ka qeyb galaya wasiiro ka tirsan xukuumadda xilgaarsiinta, waxaana lagu wadaa in looga doodo xaaladda Muqdisho, xalinta qalalaasaha ka dhacay iyo qorshaha dib u bilaabidda wadahadalkii Doorashada Soomaaliya.
Previous articleMadaxtooyada Somaliya oo si Hoose uga jawaabay Warbixintii ay New York Times ka qortay Farmaajo
Next articleRW Rooble oo ku dhawaaqay ciidamo Nooc Cusub ah oo loo dhisayo Amniga Doorashada